သျှမ်းပြည်အတွင်း လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းပဋိပက္ခများ ​နဲ့ RCSS/SSA-S က ဘာလို့ စကစကို မတိုက်​သေးတာလဲ ? - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | April 16, 2021 | knowledge | No Comments
ဒီရက်ပိုင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေ​ပေါ်မှာ​ရော၊ ကျွန်​တော့်ကို​​ရော လာလာ​မေးကြတယ်။ RCSS/SSA-S က ဘာလို့ စစ်​ကောင်စီကို မတိုက်​သေးတာလဲ။ ဘာလို့ သျှမ်းအချင်းချင်း ချ​နေကြတာလဲတဲ့။ တချို့ကျပြန်​တော့လည်း RCSS ကို ခွထိုင်တာတို့၊ သာတဲ့ဘက်ဝင်​ပေါင်းမှာတို့ စသဖြင့် စကားနာထိုး​နေကြပြန်တယ်။
( ၁ ) တကယ်​တော့ စစ်အုပ်စု အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ ပထမဆုံး ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ EAO က RCSS/SSA-S ဖြစ်သလို ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလဆန်းတုန်းက မိုင်းပန်ဖက်မှာ စစ်​ကောင်စီနဲ့ ထိ​တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့​သေးတယ်။ စကစ နဲ့ တိုက်ပြီး ​နောက်ပိုင်းမှာ SSPP+TNLA ပူး​ပေါင်းတပ် က RCSS ကို ဝင်တိုက်ပြီး သုံ့ပန်း (၁၈​)ယောက်ဖမ်းခဲ့ရာက​​နေစပြီး RCSS နဲ့ SSPP+TNLA တို့စစ်​ရေးဟာ ပိုပိုတင်းမာလာခဲ့တယ်။ ဒါဟာ စကစ အာဏာသိမ်းပြီး​နောက်ပိုင်း လူမျိုးစုတပ်အချင်းချင်းအကြား ပဋိပက္ခပိုမိုတင်းမာလာရခြင်းရဲ့ အရင်းခံ​တွေပါပဲ။
( ၂ ) RCSS ဟာ သျှမ်း​မြောက်ကို ​ဘာ​ကြောင့်​ရောက်လာရသလဲဆိုတာလည်း သိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု ​ရွှေဖီ​မြေတို့၊ မားနဂါးတို့လို ဝါဒဖြန့်မီဒီယာ​တွေ ဖြန့်​နေကြသလိုမျိုး RCSS က သျှမ်း​မြောက်ကို ကျူး​ကျော်ဝင်လာတယ်ဆိုတာ မမှန်ပါဘူး။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ခွန်ဆာရဲ့ MTA ပြိုကွဲသွားပြီး​တော့ စဝ်ယွက်ဆစ်က SURA ( ယခု RCSS/ SSA-S ) အဖြစ် ပြန်ခွဲထွက်ပြီး လွယ်တိုင်းလျန်းမှာ ဌာနချုပ်အ​​ခြေစိုက်ပါတယ်။ စဝ်ကမ်းယွတ်က​တော့ ၁၉၉၅ ကတည်းက SSNA အဖြစ်ခွဲထွက်ပြီး သီ​​ပေါမြို့မှာ ဌာနချုပ်စိုက်ကာ သျှမ်း​မြောက်တခွင်မှာ စစ်​ရေးလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်နဲ့ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ SSNA ကို အတင်းအကျပ်လက်နက်ချခိုင်းတဲ့အခါ လက်နက်မချတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းယီ ( ယခု RCSS ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ၁ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ) နဲ့ တပ်မဟာသုံးခု (တပ်မဟာ ၆/၉/၁၆) အင်အား ၅၀၀၀​ကျော်လောက်က RCSS ဆီ သွား​ရောက်ပူး​ပေါင်းခဲ့တယ်။ ဒါ​ကြောင့် အခုချိန် RCSS က သျှမ်း​​မြောက်ကို ​ရောက်လာတာဟာ တစ်ချိန်က SSNA ရဲ့ နယ်​မြေ​တွေဆီ ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းရီက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်လာပြီး လက်ရှိ RCSS ရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်။
( ၃ ) ဒါဆို SSPP က RCSS ကို ဘာလို့တိုက်သလဲ။ TNLA က ဘယ်လိုပါလာသလဲ ​မေးစရာရှိတယ်။ SSPP က သျှမ်းပြည်ကို ဗကပတွေဝင်​ရောက်စဥ်တည်းက လက်နက်ခဲယမ်း​​တွေ တရုတ်က​နေ အ​ထောက်အပံ့ရဖို့အတွက် ဗကပ နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဗကပကို UWSA ဝ ​ခေါင်း​​ဆောင်​တွေက အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း UWSA နဲ့ SSPP ​ခေါင်း​ဆောင်​တွေဟာ ဒီ​နေ့အထိ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာဆက်နွှယ်မှု​တွေအရ မဟာမိတ်အဖြစ် ရပ်တည်​နေတယ်။ UNFC မဟာမိတ်လည်းဖြစ်ကြတယ်။ ၁၉၉၀ မှာ UWSA အပစ်ရပ်စဲပြီး မကြာခင်မှာပဲ SSPP/SSA အဖွဲ့လည်း အပစ်ရပ်ခဲ့တယ်။ UWSA က ဗကပက​နေခွဲထွက်ပြီး​​နောက်ပိုင်း ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်း​ရေးရယူပြီး စစ်တပ်ရဲ့ အကူအညီ​တွေနဲ့ ခွန်ဆာ MTA ကို ဘိန်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖူးတယ်။ MTA ခွန်ဆာလက်နက်ချ ပြိုကွဲပြီး​နောက်မှာ ခွဲထွက်လာတဲ့ RCSS/SSA-S နဲ့ မကြာခဏ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ RCSS အ​ခြေစိုက်ရာ လွယ်တိုင်းလျန်းဌာနချုပ်ကို ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ပူး​ပေါင်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။ ၂ဖက် အကျအဆုံး ​ထောင်ချီပြီး UWSA ဘက်ကလည်း အထိနာစွာ နဲ့ တပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တုန်းကလည်း RCSS စစ်​ဒေသ(၁)ဖြစ်တဲ့ လွယ်​​ကော်ဝမ်းကို UWSA နဲ့ ဗမာစစ်တပ်တို့က ပူး​ပေါင်းပြီး ဝိုင်းခဲ့ဖူးတယ်။ ဗမာစစ်တပ်ဘက်က ဒရုန်းနဲ့ သတင်း​ထောက်လှမ်းတာကို RCSS ဘက်က ပစ်ခဲ့လို့ တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားလုဆဲဆဲအထိ စစ်​ရေးတင်းမာမှု​တွေရှိခဲ့တယ်။ ( ၁နှစ်​တောင်မပြည့်​သေး )
​ပြောရရင် RCSS နဲ့ UWSA ဟာ မဆလ​ခေတ် ဗိုလ်မိုးဟိန်းရဲ့ SURA (​နောင် MTA နဲ့ပူး​​ပေါင်း) နဲ့ ဗကပ အကြား ရန်စ​တွေကို ဒီက​နေ့ ၂၁ရာစုအထိ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်​ဆောင်လာသ​ယောင် ရှိ​နေတယ်။ ( ဗိုလ်မိုးဟိန်းက​တော့ ဗကပ ကို မလိုလားသူဖြစ်တယ်။ SSPP/SSA-N ဟာ ဗကပ နဲ့ ​ပူး​ပေါင်းခဲ့တဲ့​နောက်မှာ​တော့ ဗိုလ်မိုးဟိန်းဟာ SSA က​နေခွဲထွက်ပြီး SURA အဖြစ် ​သျှမ်းပြည်​တောင်ပိုင်းမှာ​တော်လှန်​ရေးဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ) UWSA ဟာ RCSS/SSA-S သျှမ်း​မြောက်မှာ ပြန်လည်ဝင်​ရောက်လာတာကိုမလိုလားလို့ မဟာမိတ်​ဖြစ်တဲ့ SSPP/SSA-N ဟာလည်း သူ့မဟာမိတ်နဲ့ တစ်သ​ဘောထားတည်းသာရှိတယ်။ TNLA က​တော့ SSPP/SSA-N နဲ့ မဟာမိတ်ပူး​ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာ​ကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်း TNLA အဖွဲ့ပါ ပါလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။
( ၄ ) UWSA က ဘာလို့ RCSS/SSA-S သျှမ်း​မြောက်ထဲပြန်ဝင်လာတာကို မလိုလားရတာလဲ ?
လက်ရှိ သျှမ်း​မြောက်​ဒေသမှာ လှုပ်ရှား​နေတဲ့ ​လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့​တွေမှာ RCSS/SSA-S တစ်ဖွဲ့တည်းသာ သမိုင်း​ကြောင်းအရ​ရော၊ မျက်​မှောက်​ခေတ်မှာပါ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရနဲ့ ရန်ငါစည်းပြတ်ပြီး diplomacy အရလည်း အဆက်အဆံမရှိဘူး။ ကျန်တဲ့ UWSA ၊ NDAA (မိုင်းလားအဖွဲ့) အပါအဝင် ​မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့ နဲ့ SSPP/SSA-N တို့ဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို အနည်းနဲ့အများ ခံ​နေကြရတာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် UWSA ဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရဆီက လက်နက်​ထောက်ပံ့မှု​တွေ အများဆုံးရပြီး SSPP/SSA-N ဟာလည်း UWSA ရဲ့အ​ထောက်အပံ့​တွေ ရ​နေတာ၊ တစ်နည်း တရုတ်ဆီက အကူအညီ​တွေသွယ်ဝိုက်ပြီး ရယူ ရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်။ ( ယခုမှမဟုတ်၊ ဗကပ လက်ထက်တည်းက ) ​နောက်ပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ​ကျောက်ဖြူ​ရေနံပိုက်လိုင်း​စီမံကိန်း၊ အာရှပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းအပြင် အခြား​သော စီမံကိန်းများစွာအတွက် သျှမ်း​မြောက်​ဒေသဟာ မဟာဗျူဟာ​မြောက် အချက်အချာကျ​တဲ့​ဒေသဖြစ်တယ်။ ဒါ​ကြောင့် သူ့ရဲ့ စီမံကိန်း​တွေ​အောင်မြင်ဖို့ အဲ့​ဒေသရဲ့ De Facto Power ရယူထားသူ​တွေက သူနဲ့တည့်ဖို့ ( တစ်နည်း သူ့သြဇာခံဖို့ )လိုတယ်။ ဒါ​ကြောင့် တရုတ်က သူ့ရဲ့ မဟာဗျူဟာအရ အချက်အခြာကျတဲ့ သျှမ်း​မြောက်​ဒေသမှာ သူထိန်းလို့မရမယ့် မြင်းဖြစ်တဲ့ RCSS/SSA-S ကို လုံးဝမနှစ်မြို့ပါဘူး။ တရုတ်က မနှစ်မြို့ရင် UWSA လည်း မကြိုက်ဘူး။ UWSA က မနှစ်မြို့ရင်လည်း SSPP/SSA-N ကလည်း ကြိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒီ​တော့ လက်ရှိ EAOs အချင်းချင်း ချ​နေတဲ့ ဇာတ်လိုက်​ကျော် လက်မဲကြီးက​တော့ CCP တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီပါပဲ။
( ၅ ) TNLA ​+ SSPP လော်ဘီ​တွေက RCSS/SSA-S ကို ဗမာစစ်တပ်အကူအညီနဲ့ သျှမ်း​မြောက်ဝင်လာတာလို့စွပ်စွဲတာ​တွေရှိတယ်။ မနှစ်တုန်းက RCSS သျှမ်း​​မြောက်ထဲ ​ရောက်ရှိလာတာကို ​ဇော်မင်းထွန်းက RCSS ဟာ NCAစာချုပ်ချိုး​ဖောက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခဲ့တယ်။ ​ဒီကိစ္စ​ကြောင့် RCSS နဲ့ ဗမာစစ်တပ်ဟာ ​ရွေး​ကောက်ပွဲမတိုင်မီ ​ကျောက်မဲမြို့နယ်က ​ဒေသတချို့မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်တပ်က​နေ ​ဒေသခံတချို့ကို အ​ကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တာ​တွေရှိတယ်။ ဒါဟာ လပိုင်းပဲရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်​တွေပါ။
ဒါကို ​လော်ဘီ​တွေက NCA တက် လက်မှတ်​ရေးထိုးထားတဲ့ ပုံ​တွေနဲ့ မဟုတ်မမှန် မုန်းတီး​ရေးဝါဒဖြန့်ချီတာ​တွေ၊ ၂ဖက်​လော်ဘီ​တွေက တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက် စစ်​ကောင်စီနဲ့ အတင်း​ပေးစား​ပြီး မသိနားမလည်တဲ့ Third person ​တွေကို မုန်းတီး​ရေးဖြန့်ချီ​နေတာ​တွေဟာ အခုအချိန်မှာ ​တော်သင့်ပါပြီ။ လူမျိုးစု​တွေရဲ့ လက်နက်ကိုင်သမိုင်းမှာ စစ်အုပ်စုနဲ့ ​ပူးပေါင်းပြီး ကျန်လူမျိုးစုတွေကို ပြန်တိုက်တာ ၂ဖွဲ့ပဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ( ထုတ်မ​ပြောချင်ပါ။ )
( ၆ ) အချုပ်အားဖြင့် ​ပြောရရင် သျှမ်းပြည်ရဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ​​တွေဟာ အရမ်းကိုရှုပ်​ထွေးလွန်းပါတယ်။ ဗကပ နဲ့ ကူမင်တန် တရုတ်ဖြူ​​တွေဟာ သျှမ်းပြည်အတွင်း ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့အတူ ဝနီ၊ ဝဖြူ ၊ ပအိုဝ်းနီ ၊ ပအိုဝ်းဖြူ ၊ SSPP ၊ SURA စသဖြင့် သျှမ်းပြည်အတွင်း လက်နက်ကိုင်တပ်​တွေဟာလည်း အယူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ​ကျောင်း​တော်ကရန်စ​​တွေ​ကြောင့် အစိတ်စိတ်အမြွာမြွာကွဲခဲ့ရသလို ခင်ညွှန့်ရဲ့ ​သွေးခွဲ​ရေးလုပ်ငန်းစဥ်​တွေဟာလည်း အင်အားကြီးမားတဲ့ ဗကပ၊ MTA တို့လို လက်နက်ကိုင်​အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါ ပြိုကွဲ​စေတဲ့အထိ ထိ​ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကချင်ပြည်မှာ KIA ၊ ကရင်ပြည်မှာ KNU/KNLA ​ကော်သူး​လေးတပ်မဟာ(၅)တို့ဟာ သူတို့ဆီမှာ တိုက်စရာဆိုလို့ အကြမ်းဖက် ဗမာစစ်တပ်ပဲရှိ​နေတာပါ။ သျှမ်းပြည်မှာ​တော့ RCSS/SSA-S အ​နေနဲ့ ဗမာအကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီအပြင် SSPP+TNLA နဲ့ UWSA ၃ဖွဲ့စလုံးကို ဆိုင်​နေရတဲ့အ​​နေအထားရှိ​နေပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ဗျူဟာတစ်ချက်မှားတာနဲ့ သမိုင်းပါ​ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ အ​နေအထားမျိုးမှာရှိ​နေတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ​လောက်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ယွက်ဆစ်ရဲ့ RCSS/SSA-S ဟာ စစ်​ကောင်စီတပ်ကို ဘာလို့မတိုက်နိုင်​သေးတာလဲဆိုတာ နားလည်​ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
( မှတ်ချက် ။ ။ EAOs ​တွေအားလုံးဟာ စစ်အုပ်စုကို ​တော်လှန်ခဲ့၊ ​​တော်လှန်ကြဆဲ အဖွဲ့​တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အစွဲကင်းကင်းနဲ့ သတိချပ်​စေချင်တယ်။ )
#RCSS #SSPP #TNLA #UWSA #SSA
ဆောင်းပါး – 蓝宗财